I-China ilweyile yebhegi yokufaka kunye neStroller Straps UKumkani
Le bhegi ibhegi ibhegi enomatshini owahlukileyo oguqukayo kunye nengxowa yebhotile egalelweyo, ayisiyiyo kuphela yonke into ebalulekileyo yebhegi yeklasikhi yeklasikhi, kodwa ikwenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye noyilo oluneenkcukacha ezifanelekileyo ukuhlangabezana nayo yonke imisebenzi kamama notata. Ukufezekisa kubomi bemihla ngemihla kunye nokuhamba.
Iimpawu zeNgxowa zeTiaper
Uyilo oluhle lwe-Unisex yooTata noMama- umthwalo wokuthwala amanabukeni kunye nezinto aziweli koomama kuphela kodwa notata ngokunjalo, kuba umntwana uza nezinto ezininzi xa esiya, le bhegi yoyilo ye-unisex ilungele ootata noomama, ayisiyomfazi kakhulu okanye yindoda kwaye ungayisebenzisa yonke imihla.
Uyilo oluVulekileyo ngokupheleleyo-uyilo oluvulekileyo ngokubanzi ngokuqinisekileyo lunokunika ukufikelela okukhawulezayo xa umntwana wakho etshica okanye efuna utshintsho lwempahla endaweni yokukhangela.
Iipokotho eziyimfuneko yangaphandle - isikhwama se-diaper esineepokotho ezi-2 zangaphandle zeeseti ezahlukeneyo zezidingo zabantwana ezinje ngeebhibhi zabantwana, iipacifiers, iipuni, umatshini wefomula kunye nezikere njl.
Amalungu ePrimiyamu eNtsimbi-iinxalenye zesinyithi ezikumgangatho ophezulu ziqinisekisa ukuba lo bhaka uzinzile ngakumbi ukuba uqhubeke iminyaka
Ubungakanani obufanelekileyo- xa kuziwa kwiingxowa ze-diaper, ubungakanani babaluleke kakhulu. Ubungakanani bale bhegi ye-chaning igqibelele kwaye inokubamba zonke iimfuno zomntwana kwaye ayizukujongeka ngathi inkulu kakhulu okanye incinci. Kwaye ibhegi ye-diaper inokuxhonywa kwi-pram kwaye uzikhulule izandla zakho.
Ukucwangciswa kwephakheji yokuhambisa amanzi nge-TPU Bladder
Heavy Duty Canvas ubhaka